Abavelisi beCroke Stroke abaXhasi kunye nabaXhasi | Ifektri yaseChina yokuChaphazeleka kweMishini
Umgaqo oSebenzayo kunye neNkcazo: I-J114 5 enamanani e-stroke counter, asetyenziselwa ukujonga kunye nokurekhoda inani lezixhobo okanye oomatshini, anokugqiba ukufundwa ngokuchanekileyo nangokukhawuleza, kunye nokufaka indawo ngokulula ngokufaka kumatshini. Ukongeza umboniso wokufunda ngokuthe ngqo kwidijithali, kunye nokusetha kwakhona kweqonga Ukhetho olufanelekileyo kumashishini elaphu
Umgaqo wokusebenza kunye neNtshayelelo: Ikhawuntari ye-JL645 luhlobo lokuphindaphindeka kwamanani ama-5 e-counter counter, isetyenziselwa ukurekhoda amaxesha okuqokelelwa kwentshukumo yokubuyisa oomatshini. Ngaphandle kokusetha kwakhona. Xa kubalwa amaxesha afikelela kwi-99999, ukubala kungaqala kwakhona ukusuka kwi-00000. Olu hlobo lwekhawuntara lusetyenziswa ikakhulu kwimizi-mveliso njengokutshintsha kombane ophezulu, izixhobo zokuvavanya kunye nezixhobo zokuprinta njl.
Umgaqo wokusebenza kunye neNtshayelelo: I-JL545B Series Mechanical Counter isetyenziselwa ukurekhoda amaxesha okuqokelelwa kwentshukumo yokubuyisa oomatshini. Ngaphandle kokusetha kwakhona, xa ixesha lokubala lifikelela kwi-99999, ukubala kwakhona kunokuqala ukusuka ku-00000 ukuya kolunye ujikelezo. Isetyenziswa ikakhulu kutshintsho lwee-voltage eziphezulu, kwaye inokusetyenziselwa izixhobo zovavanyo, izixhobo zokuprinta, njl.
JL055B-A Series Mechanical Stroke Counter kunye liqhina ngokutsha
Umgaqo wokusebenza kunye neNtshayelelo: I-JL055B Series 5-digit stroke stroke counter isetyenziselwa ukurekhoda amaxesha okuqokelelwa kwentshukumo yokubuyisela umatshini. Ngokusetha iqhosha, ukujika i-lever eseleyo kunokuseta onke amanani e-counter ukuya kwi-zero. Isetyenziswa ikakhulu kumashishini afana noomatshini, ushicilelo, iswitshi ephezulu kunye nevolthi ephantsi, njl.